Football Khabar » ब्राजिलका जेससलाई पनि छाडेन कोपाले : लगायो प्रतिबन्ध !
ब्राजिलका जेससलाई पनि छाडेन कोपाले : लगायो प्रतिबन्ध !
दक्षिण अमेरिकी फुटबल महासंघ (कन्मेबल) ले ब्राजिलका स्टार फरवार्ड ग्याब्रिएल जेससमाथि प्रतिबन्ध लगाएको छ । महासंघले उनीमाथि ३० हजार अमेरिकी डलर जरिमानासहित २ महिनाको प्रतिबन्ध लगाएको हो ।
गत महिना ब्राजिलमा भएको कोपा अमेरिका दौरान फाइनल खेलमा रातो कार्ड खाएकोमा त्यसपछि खराब व्यवहार देखाएको भन्दै महासंघले उनीमाथि प्रतिबन्ध लगाउने फैसला गरेको हो । पेरुविरुद्धको फाइल खेल दौरान जेससले दोहोरो पहेंलो कार्डका साथ रातो कार्ड पाएर ७०औं मिनेटमा मैदान छाडेका थिए । उनले फाइनलमा १ गोल पनि गरेका थिए ।
मैदान छाड्नेक्रममा उनले पानीको बोतललाई किक हान्दै ड्रेसिङ रुम प्रवेश गर्नेक्रममा भिएआर मेसिनलाई समेत धक्का दिएर हिँडेका थिए । यो प्रतिबन्धसँगै अब जेससले २ महिनासम्म अन्तर्राष्ट्रिय खेल खेल्न पाउनेछैनन् । जसमा उनले अर्को महिना पेरू र कोलम्बियासँग हुने खेल गुमाउनेछन् ।
प्रकाशित मिति २३ श्रावण २०७६, बिहीबार ११:२९